6-Xherdan Shaqiri: Xidiga reer Switzerland waxa uu soo qaatay xili ciyaareed isku dhaf ah oo wanaag iyo xumaantiisa lahaa, waxa uu marar badan xaday quluubta jamaahiirta Liverpool gaar ahaan kulankii Manchester United ee uu labada gool ka dhaliyay.
Laakiin Shaqiri ayaa inta badan ku soo dhamaystay kursiga kaydka Liverpool wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda ay Reds u furan yihiin in ay xagaagan iibin karaan.
Laakiin Shaqiri waxa uu kulamada saaxiibtinimo ka dhigan karaa meeshii uu ku badali lahaa aragtida Klopp ee uu ugu qasbi lahaa in kooxda lagu sii hayo oo uu booskiisa u dagaalamo.
Liverpool way ku faa’iiday saxiixa Shaqiri maadaama oo ay lacag aad u hoosaysa ku heshay xagaagii hore, waxayna xataa ka samayn kartaa faa’iido badan haddii ay go’aan ku gaadhaan in ay iibiyaan.
7-Rhian Brewster: Da’yarka reer England ee Rhian Brewster ayaa haysta fursadii cumrigiisa ugu fiicnayd maadaama oo uu Klopp doonaya in uu Rhian Brewster siiyo fursad uu ku noqon karo xidiga badalka u noqon kara saddexda weerarkiisa ee Salah, Mane iyo Firmino.
Rhian Brewster waa mid ka mid ah gool dhalyaasha da’yarta ah ee aduunka ugu fiican wuxuuna ku soo muujiyay kooxaha da’yarta Liverpool iyo xulkiisa England oo uu koobka aduunka kula soo guulaystay.
Rhian Brewster waxa uu kulamada saaxiibtinimo ee kooxdiisa Liverpool ka heli karaa go’aanka uu Klopp ku samayn karo in uu fursad wayn xili ciyaareedka cusub siiyo ama in uu wali u baahan yahay inuu soo dagaalamo.
Wararka ayaa sheegaya in Klopp uu ka maarmi karo in uu gool dhaliye kale soo iibsado isaga oo ku xisaabtamaya Rhian Brewster iyo Origi oo la ogaa wixii uu soo sameeyay.